Warbixin ku saabsan kansarka - Kreftforeningen
Forsiden Om Kreftforeningen
Warbixin ku saabsan kansarka
Buug-yarayaashaan warbixinnada waxaa laga keennay wadamo kale. Waxaa dhici karta in warbixinta kansarka ee Norway ay ka duwan tahay tan waddamada kale. Kala hadal dhakhtar kaaga joogtada ah.
DVD ku saabsan kansarka naasaha galo oo wadamo kala duwan laga soo duubay, Waxaana sameeyey ururka kansarka (Kreftforeningen).
Waa maxay kansar
Waa maxay kansar? (Hva er kreft?)
Astaamoyinka lagu garto kansarka (Symptomer på kreft)
Filim ku saabsan waxyaabaha xishood dartii loo qarsado, dhaqanka, diinta, dawooyinka dabiiciga ah.
Yareey khatarta kansarka (Reduser kreftrisikoen)
Fitimiin D iyo shucaaca qorraxda (Vitamin D og UV-stråling)
Ku saabsan tallaalka HPV ee borogaraamka tallaalka carruurta (Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet). Buug-yaraha waxaa ku qoran warbixin ku saabsan kansarka ku dhaca dhuunta ilmagaleenka (livmorhalskreft) iyo sida uu tallaalka HPV uu gabdhaha yar yar uga difaaco in uu cudurkaasi noloshooda danbe ku dhoco. Waxaa sidoo kale buugyaraha ku qoran sida tallaalka dadka loogu dhufto, iyo waxyeellada danbe ee tallaalka ka imaan karta.
Waxyaabaha laga xishooda
Carruurta iyo sigaarka oo agtooda lagu cabbo (Barn og passiv røyking). Ururka kansarka waxay sameeyen warbixin ku saabsan carrurta iyo sigaarka agtooda lagu cabbo oo af Somali ah. Halkaan hoose kala soo bax qoraalkaan warbixineed oo ula tag kalkaalisada joogta ruugta caafimaadka ee xaafadaada si aad faahfaahin buuxda uga heshid. Waxaad sidoo kale heli kartaa cawinaad ku saabsan sidaad u joojin lahayd sigaarka.
La soo deg warqad wax sharraxaysa (bog kale) oo talooyin fiican kaa siineysa sidi aad uga hortegi lahayd in aad sigaarka ku cabto carruurta agtooda.
Baaritaanka naaska (Mammografi)
Helitaanka/ogaashaha kansarka xiidmaha (Oppdag tarmkreft tidlig)
Caado wanaagsan waxaykentaa nolol caafimaad (Gode vaner for et friskere liv)
Digtooreysa Sacdiya Jaamac oo ka hadleysa kansarka dhuunta ilmagaleenka iyo muhiimadda ay leedahay in baaritaanka unugyada (celleprøver) la iska qaado hal mar saddexdii sanaba si looga hortago kansarka dhuunta ilmagaleenka.
Baartaanka dhacaanka/hilib yar laga qaada si looga baara kansarka (Biopsi)
Xanuunada ama dhibaatooyinka qanjidhka kaadi mareenka raga (Prostataproblemer)
Gormaa kuugu dambeysay in aad iska qaaddo baaritaanka kansarka dhuunta ilmagaleenka (minka) galo? (Når tok du en livmorhalskreftprøve sist?)
Isbeddelka ku dhaca unugyada dhuunta ilmagaleenka (minka).(Celleforandringer i livmorhalsen)
Kansarka naasaha (Brystkreft)
Kansarka malawadka (xaartada) iyo xiidmaha weyn (Kreft i ende- og tykktarm)
Kansarka qanjidhka kaadi mareenka raga (Prostatakreft)
Kansarka sambabada (Lungekreft)
Dawooyinka unugyada kansarka dilo (Cellegift)
Sidda loo habeeyo ama ilaaliyo isticmaalka dawooyinka unugyada dilo (Trygg håndtering av cellegift)
Waxyeellada danbe ee ay keenaan daawooyinka kansarka (Bivirkninger av kreftbehandling)
Waanooyin wanaagsan ee ku saabsan lalabadda iyo mataga (Gode råd ved kvalme og oppkast)
Iska ilaali infakshan/hurgun marka dafaaca jirka uu liita (Unngå infeksjoner når immunforsvaret er dårlig)
Qofka kansarka qabo
Doonista cuntada yaraata (Nedsatt matlyst)
Waa inaad si wanaagsan wax u cunto marka kansarka lagaa daaweynayo (Å spise godt under behandling)
Barashada in la nasto marka kansar la qabo (Å lære seg å slappe av når man har kreft)
Isbedelka ku dhaca dareenka urta iyo dhadhanka (Endret lukte- og smaksans)
Afka oo ku qallalan/engegan (Munntørrhet)
Waanooyin ku saabsan af qallalka/engega (Råd mot munntørrhet)
Nabar afka iyo cunaha (Sår munn og hals)
Marka miisaan kaaga uu korda wakhtiga daaweynta kansarka (Å gå opp i vekt pga kreftbehandling)
Marka miisaan kaaga isdhima wakhtiga daaweynta kansarka (Å gå ned i vekt pga kreftbehandling)
Markaad ku xanuunsato Norway
Warbixin ku saabsan markaad cudurka kansarka qabto wadanka Norway. Qofka cudurka kansarka qabo, astaamoyinka, daaweynta iyo xuquuqda. Baro in ka badan ee ku saabsan yareynta khatarta kansarka.
Waxaad xaq u leedahay warbixin buuxda marka aad ku xanuunsato Norway. Haddii aad luuqad ahaan u fahmi weydo hadalka shaqaalaha caafimaadka, u sheeg in aad u baahan tahay turjubaan. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa xaqa aad u leedahay warbixin in lagu siiyo iyo muhiimadda ay leedahay in aad turjubaan khibrad leh adeegsato. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa halkan turjubaanka shaqadiisa wax ay tahay iyo sida adiga bukaanka ah aad ugu faa’ideysan karto wadahadal laguu turjumayo.
Buugga xiriirka ee bukaanka
Buugga xiriirka waxaad ka heleysaa su’aalaha inta badan lays weydiiyo, farriimaha iyo warbixinta bukaanka la siiyo. Buuggu wuxuu leeyahay sawirro fudud. Buuggu ma beddelayo adeeggi turjubaanka, laakin waxa uu ku caawin karaa mararka aan turjubaan joogin.
Xaruunta dhakhaatiirta kaltanka leh
Marka noloshu khatar ku jirto dir teleefanka 113 oo ah caawin aanbalaas.
Haddii Jabniin iyo dhaawac weyn jiro, tag xarunta dhakhaatiirta kaltanka leh oo furan habeen iyo maalin.
Marka aad caawinnaad degdeg u baahneen, la xiriir dhakhtar kaaga joogtada ah. Magaca dhakhtar kaaga, cinwaan kiisa iyo teleefon kiisa, waxaad ka heleysaa warqada ay kuu soo direen waaxda caymiska dadweynaha markii lagu siiyey dhakhtarka magaciisa (tildelingsbrevet fra trygdeetaten).
Isbataal oollid wanaagsan
Halkaan waxaad ka heleysaa 10 waanoooyin oo kuu fududeyneyso markaad ku jirto isbataalka ama lagu dhigayo. Xaruunta aqoonta iyo adeega caafimaadka ee dugsiyada qaranka.
Shaqada iyo fasaxa jirrada
Ma xanuunsan tahay oo ma u baahan tahay fasax jirro oo wakhti gaaban ama wakhti dheer? La hadal shaqabixiyahaaga ama la xiriir xafiiska NAV ee kuugu dhow.
Xarunta caafimaadka ee qoxootiga aan sharciga lahayn
Warbixin kusaabsan xuquuqda iyo helitaanka daryeel caafimaad ee muhaajiriinta sharci la aanta ah ee ku nool dalka norway.
Kansarka muxuu yahay?
Waxaa jira noocyo badan oo kansar ah. Kansarku waxa uu leeyahay calaamado kala duwan oo lagu garto, waxayna ku xiran tahay hadba meesha uu galo iyo inta uu faafay. Waa muhim in kansarka la helo wakhti hore. Marka ay daaweyntu goor hore billaabato ayaa fursadda lagaga bogsanayana ay sii weynaataa.
Ugu yaraan hal ka mid ah Sadaxdii kansarba mid baa ku saleysan habka aan u nool nahay. Waxyaabaha kale ee keeni karo kansarka waa dhaxalka iyo deegaanka uu qofku ku nool yahay. Halista kansarka waad yareyn kartaa haddii aadan sigaarka cabbin, aad cunto raashin caafimaadka u roon, aad iska ilaaliso inaad aad u cayisho oo aad dhaqdhaqaq badan sameysid.
Muxuu qofka sameynayaa markuu xanuunsado?
Haddaad dareento xanuun, ballan ka sameyso dhakhtarkaaga joogtada ah (fastlege). Dhakhtarkaaga joogtada ah ayaa kuu sii gudbinaaya dhakhtar ku takhasusay kansarka haddii uu wax kugu arko. Qof kasta oo ku nool degmo Norway ah wuxuu xaq u leeyahay dhakhtar joogto ah. Haddii shaki kaaga jiro dhakhtarkaaga joogtada ah waxaad wici kartaa telefoonka dhakhaatiirta joogtada ah ee 810 59 500.
Sidee loo yareyn karaa khatarta kansarka?
Ururka kansarka wuxuu dhiraandhiriyay waanooyin oo kaa caawiyo sidda aad ugu noolaato nolol caafimaad leh. Wax damaanaad ah ma leh xagga helitaanka kansarka, laakin haddi aad qaadato waanooyinka lagu siiyo, dadaal badan ayaad samaysay xagga caafimaad kaaga.
Sanad walba, 30.000 oo qof ayuu ku dhacaa kansarka wadanka Norway. Saamayn badan ku ma yeelan karno waxyaabaha keeno kansarka laakin waxaan yareeyn karnaa khatartiisa. Waanooyin keena ayaa kaa caawinayo sidda aad ugu noolaato noolol caafimaad. Si aad khatarta kansarka u yareyso, waxaa nagga waano ah in aad joojisid sigaarka, cuntid raashin kala duwan oo nafaqa leh, wakhti u heshid in aad jimicsi samayso oo qoraxayso adoo iska ilaalinaayo in uu maqaar kaaga gubto. Waanoyin kaan waxay kaa caawinayaan caafimaad kaaga.
Ka qaybqaado baaritaanada
Qof kasta oo ku nool Norway, waxaa loo soo diraa deeq baaritaano si loo helo astaamoyin keeni karo kansarka, kansarka oo bilow ah ama intuu jirka ku faafin, sidda loo daaweyo si dagdag ah. Baaritaanada caadiga loo baaro waxaa ka mid ah kansarka dhunta ilmagalaynka iyo naaska gallo oo dadka waaweyn laga baaro.
Waa muhiim in aad ka qaybqaadata baaritaanadaan si aad u heshid caawinaad haddi lagaa helo wax aan caddi ahayn. Waxa kale oo gabdhaha dhigta fasalka todobaad loo bilaabay talaal oo ka hortag ah ee fayraska loo yaqaano HPV. Fayraska HPV wuxuu keeni karaa kansarka dhunta ilmagalaynka galo iyo nocya kale ee kansarka ah. Talalkaan waa muhiim in la qaato si ka hortag loo sameeyo oo kansarkana u yaraado.
Dad badan ayaa joojiya sigaarka
Caafimaadka qofka waxay ku xerantahay habka noolasheenu ay tahay. Waxa ugu muhiimsan oo aad sameyn karto ee ku saabsan ka hortaga kansarka waa in aad iska ilaaliso tubaakada/sigaarka. Maanta boqolkiiba, todobaatan iyo shan ee dadweynaha ayaan cabin sigaarka. Soddon iyo shan kun (35 000) oo qof ayaa jojisay sigaarka sanadki ugu dambeeyey. Ma dhici kartaa in aad tahay dadka weli sigaarka cabbo laakin rabo in ay joojiyaan? Dadka intooda badan iskood ayeey u joojiyaan sigaarka laakin haddi aad caawinaad u baahantahay la xiriir khadka sigaar joojinta (røyketelefonen) 800 400 85 ama gal internattka ee caawinaada sigaar joojinta slutta.no, Røykeslutt, ama mobilappen Slutta. Sigaarka oo aad cabbin waxay u wanaagsantahay caafimaad kaaga laakin waxay aad iyo aad ugu muhiimsantahay carrurta. Carrurta agtooda sigaarka lagu cabbo way ka jira badan yihiin carrurta kale.
Sidaan ayaad u yareyn kartaa khatarta kansarka
1. Iska ilaali sigaarka
2. Iska ilaali cayilka badan
3. Wakhti sii jirdhiska
4. Cun raashin kala duwan oo nafaqo leh
5. Iska ilaali sharaabka/khamriga
6. Qoraxeeyso laakin ka ilaali maqaar kaaga in uu gubto
7. Dhakhtar la xiriir haddi aad jirkaaga wax isbadal ku aragto
8. Ka qaybqaado baaritaanada kansarka
9. Raac waanooyinka ku saabsan iska ilaalinta waxyaabaha keeni karo kansarka
Warbixin caafimaad iyo Wadahadal caafimaad – deeq ay fududdayen in la helo (lavterskeltilbud) waa mashruuc wadashaqeyneed oo ka dhaxeeyo degmada Oslo, isbitaal iyo hey’adda caafimaadka Oslo iyo Akershus iyo Pak Radio Voice ee Oslo.
Ku saabsan ururka kansarka (Kreftforeningen)
Ururka kansarka warbixintiisa waxaa lagu qoray luqadaha norweejiga iyo ingiriiska. Waa urur samafal oo Norway oo idil ka jira si walanteeri ahna uga shaqeeya arrimaha kansarka.
Ururka kansarku wuxuu wadashaqayn hoose la leeyahay 13 ururro samafal ah oo dalka oo idil ka jira iyo hey’ado bukaan oo madaxbannaan kuwaas oo matala dad uu kansar ku dhacay iyo qaraabadooda.
Khadka telefonka ee kansarka
Khadka telefonka (Kreftlinjen) waa qad telefoneed oo ku saabsan warbixinta iyo caawinaada. Waxa aad la hadli kartaa kalkaaliso (sykepleier), qof ku taqasusay arimaha bulshada (sosionom) iyo sharci yaqaan (jurister) oo kaa caawin karo su`aalaha aad qabto ee ku saabsan kansarka iyo xuquuqda aad leedahay (trygdespørsmål). Waxaad kala xiriiri kartaa internettka, sms iyo chatka. Magacaada waa qarsoodi telefonkana waa bilaash marka aad ka soo hadleysa telefonka guriga (fasttelefon). Anaga waxaan ku hadalnaa luuqadaha norwejiga, ingiriis iyo samisk.
Dir khadka telefonka ee kansarka (Kreftlinjen) 800 57 338 ama ciwaanka internettka kreftforeningen.no/somali.
Waqtiyada uu telefonkaan kuu furan yahay:
Isniin – khamiis: 09:00 – 20:00 (norweji iyo ingiriis)
Jimco: 09:00 – 15:00 (norweji iyo ingiriis)
Sabti iyo axada: wuu xeranyahay/la mahelo khadkaan
Xiriiriye ku taqasusay kansarka
Baahida dadka kansarka qaba iyo qaraabadiisa wey kala duwan tahay, waana wax isku jira oo waqti qaadan karo. Gobolada waxa ay leeyihin xiriiriye ku taqasusay kansarka (kreftkoordinator). Waxa ay caawiyaan ama garabqabtaan dadka kansarka qabo. Waxa ay ku hadlaan luqadaha norwejiga iyo ingiriska. Raadi in gobolkaad ku nooshahay uu leeyahay xiriiriye (kreftkoordinator).
Beesha lagu magacaabay (Vardesenteret) waa meel dadka kansarka qabo iyo qaraabadooda ay ku kulmaan
Vardesenter (boggooda internetka) waa meel aad kula kulmi karto dad kale oo kansar qabo ama qarabadiisa iyo dad ka shaqeeyo caafimaadka. Halkaan waxaad ka heleysaa talo fiican oo lagu bixinayo luuqadaha norweejiga iyo ingiriiska. Waxaad ka qaybqaadan kartaa koorso iyo firfircooni kaa caawiya sidi aad ugu noolaan lahayd nolol caadi ah adoo qabo kansarka.
Vardesenteret wuxuu ku yaallaa:
Isbataalka Ullevål, Oslo
Universitetssykehuset Waqooyiga Norway, Tromsø
Hadii aad fikrad kale ku kordhineysid qoraalkan warbixinta ah, la xiriir May-Britt Knobloch oo kala xiriir cinwaankaan may-britt.knobloch@kreftforeningen.no oo ku hadleysa luuqadaha norwejiga iyo ingiriis.